တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံကို မွနျမာနိုငျငံမှ ဆနျတနျခြိနျ (၂၀၀)လှူဒါနျးခဲ့ - Myanmar Farmers' Portal
Home စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသတင်း တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံကို မွနျမာနိုငျငံမှ ဆနျတနျခြိနျ (၂၀၀)လှူဒါနျးခဲ့
လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံက အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါအခွအေနမြေားကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကနေ ဆနျတနျခြိနျ(၂၀၀)ကို မတျလ(၁)ရကျနကေ့ လှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈကွောငျး Myanmar Foreign Affairs Myanmarရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှသိရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံနဲ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမွှငျ့တငျရေးကိုအလေးအနကျ ထားတဲ့အနနေဲ့ ဧညျ့မထ (၂၅% Well Milled )ဆနျတနျခြိနျ (၂၀၀)ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈ ကွောငျး သိရပါတယျ။
အဆိုပါအခမျးအနားကို စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန မှဒုတိယဝနျကွီး ဦးအောငျ ထူး ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr.Chen Hai နဲ့သကျဆိုငျ ရာဌာနမြားမှတာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
ဧညျ့မထ (၂၅% Well Milled )ဆနျတနျခြိနျ (၂၀၀) ကိုလညျး မွနျမာနိုငျငံမှ မူဆယျ ၊ ကယျြဂေါငျနယျ စပျဂိတျမှတဈဆငျ့ ဟူပမွေို့နယျရှိ မွို့နယျ(၁၇)ခုကို ပေးပို့လှူဒါနျသှားမှာဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချိန် (၂၀၀)လှူဒါန်းခဲ့
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါအခြေအနေများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဆန်တန်ချိန်(၂၀၀)ကို မတ်လ(၁)ရက်နေ့က လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Myanmar Foreign Affairs Myanmarရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမြှင့်တင်ရေးကိုအလေးအနက် ထားတဲ့အနေနဲ့ ဧည့်မထ (၂၅% Well Milled )ဆန်တန်ချိန် (၂၀၀)ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ် ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင် ထူး ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Chen Hai နဲ့သက်ဆိုင် ရာဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဧည့်မထ (၂၅% Well Milled )ဆန်တန်ချိန် (၂၀၀) ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဆယ် ၊ ကျယ်ဂေါင်နယ် စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ဟူပေမြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်(၁၇)ခုကို ပေးပို့လှူဒါန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။